Reunion sy ny filoham-pirenena Madagascar miresaka ny fiaraha-miasa amin'ny faritra
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Reunion sy ny filoham-pirenena Madagascar miresaka ny fiaraha-miasa amin'ny faritra
Janoary 29, 2019
Nisy ny fihaonana teo amin'ny filohan'ny Faritra Réunion, Didier Robert, sy ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara vaovao, ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Tamin'ny fitsangatsanganana ofisialy ho an'i Madagasikara tamin'ny fotoana nanambazana ny filohan'ny Repoblika vaovao natao ny 19 janoary teo nanatrehan'ny filoham-panjakana afrikanina maromaro sy ny solontenan'i France, ny filohan'ny faritra Réunion, Didier ROBERT dia nihaona tamin'ny alatsinainy 21 janoary miaraka amin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara vaovao, ny Andriamatoa Andry Rajoelina ao amin'ny lapan'ny fanjakana Iavoloha eto Antananarivo.
Ity fivoriana voalohany ity, taorian'ny fifidianana demokratika nofaritana ho manan-tantara nataon'ny mpanara-maso iraisam-pirenena, dia ho an'ny filoha Didier Robert, fotoana hanamafisana ny fatoram-piraharahana eo amin'ny nosy Réunion sy ny "Nosy Lehibe". Ny filoham-pirenena Didier Robert dia mino fa izao no fotoana hanamafisana ny fiaraha-miasa mavitrika misy ary hanamafisana ireo lalan'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatry ny: toekarena (fizahan-tany, angovo, fambolena…), fanabeazana, fiofanana ary ny tontolo iainana manokana. Nanangana fiaraha-miasa mifantoka bebe kokoa amin'ny toekarena, fanondranana ary fizahantany i Reunion sy i Madagascar
Tamin'ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana Framework Eoropeana Interrreg V OI € 63 tapitrisa, ireo nosy roa ireo dia ahitana tetik'asa marobe mahasoa ny olona eo amin'ny sehatry ny toekarena sy ny fiofanana manokana. Ny fifandraisan-doha sy ny refy matanjaka izay tian'ny Filoham-pirenena Malagasy vaovao homena anio ho an'ny hetsika fiaraha-miasa dia manamarika dingana vaovao sy mampanantena eo amin'ny fifandraisana roa tonta. Hoy ny filoha Andry Rajoelina: “Mitovy ny vinanay amin'ny fampandrosoana ny faritry ny Ranomasimbe Indianina. Tsy maintsy hararaotintsika ny akaiky antsika mba hiaraha-miasa bebe kokoa amin'ny sehatra toy ny fambolena, angovo, indostrialy. Ny fahalalàna, ny injeniera ao La Réunion izay mialoha ny sehatra maro samihafa toy ny indostrian'ny akoho amam-borona na ny angovo, dia tokony hamela antsika hanakaiky kokoa sy hivoatra hahatratra izay. Anisan'ireo lohahevitra laharam-pahamehana noresahina nandritra ity tafa ity: fizahan-tany maharitra, fifandraisana amin'ny rivotra, fiofanana amin'ny sehatry ny fambolena, fahaizan'i Reunion amin'ny angovo azo havaozina ary ny fitantanana fako.
Niharihary ireo tetik'asa vaovao tarihin'ny filoha Andry Rajoelina. Anisan'izany ny fitaterana, ny làlana ary koa ny fampandrosoana ny famokarana akoho miaraka amin'ny fanohanana sy ny fahalalan'ny indostrian'ny Réunion. Ho fampandrosoana ny fizahan-tany maharitra momba ny natiora any amin'ny Ranomasimbe Indianina: ny ezaka iraisana natao tamin'ny alàlan'ny programa Vanilla Islands sy ny tombony ara-toekarena amin'ny fitsangantsanganana izay mahasoa ny toerana itodiana any amin'ny Ranomasimbe Indianina, ao anatin'izany ny fahatsinjovan'ireo orinasa vaovao dia tokony hitohy sy hihamafy.
Ny filoha vaovao dia mikendry, amin'ity dinam-panahy ity, handresy lahatra ireo mpampiasa vola vaovao hampitombo ny tolotra sy ny fahasarotana (trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana) ary hanamarihana ny tosika vaovao amin'ny politikan'ny fizahantany. Ny vina nozarain'ny filoham-pirenena madagasikara sy ny filohan'ny réunion réunion dia ny fampivoarana ny fizahan-tany maharitra any amin'ireny faritra ireny miaraka amina fananana miavaka amin'ny resaka biodiversité, fizahantany mamela ny famoronana asa. Ny Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara dia nanasa an'i La Réunion tamin'ny fomba ofisialy handray anjara amin'ny fihaonambe iraisam-pirenena momba ny fizahantany hatao any Nosy Be amin'ny volana aprily ho avy izao.
Mikasika ny olana amin'ny fitehirizana, fanatsarana ny harena voajanahary sy ny vakoka voajanahary: ny fananganana ny masoivohom-paritra ho an'ny biodiversité (ARB) ao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia tokony hamela handrindra tsara ny fanekena, ny fanairana ary ny filan'ny nosy rehetra ao amin'ny Ranomasimbe Indianina, tsara ankoatran'ny Nosy La Réunion.
Ho an'i Didier Robert, "ny harena tsy manam-paharoa sy ny velaran'ny tanin'i Madagasikara amin'ny resaka biodiversité dia tokony hahafahany mitarika amin'ireo olana ireo". Mikasika ny fifandraisana amin'ny rivotra, ny filoha Didier Robert dia nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana fiaraha-miasa stratejika sy ny fifanarahana tompon'andraikitra amin'ny Air Austral / Air Madagascar. "Fanapahan-kevitra lehibe ho an'ny fiaraha-miasa isam-paritra, satria io fanambadiana eo amin'ny mpitatitra isam-paritra roa io dia nanoratra ny fiaraha-miasa misy antsika amin'ny lafiny iray amin'ny fahamboniana izay hihaona amin'ny fanambin'ny fizahan-tany sy ny fizahantany iraisam-pirenena amin'ny fampiroboroboana ny toerana haleha" Nosy Vanilla ", ny fanafainganana ny ny fifanakalozana entana sy olona eo amin'ny faritaninay roa…
Ity fiaraha-miasa stratejika ity dia efa nahafahana namorona ny 2 Jolay 2018 an'ny TSARADIA (translation bon voyage), izay famerenana amin'ny laoniny ny Air Madagascar, nasionaly ho an'ny sidina anatiny.
Ho famaranana, ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny filohan'ny Réunion Réunion dia maniry ny hanokatra vanim-potoana vaovao miaraka amin'ny dinamisme sy finiavana ary hanakaiky kokoa, hanombatombana ny fahaizan'ny tsirairay hiasa hahomby eo amin'ny samy izy.
Fitsidihan'ny delegasiona hanamafisana ny fiaraha-miasa ao Indonezia - Seychelles
Tale jeneraly vaovao ao amin'ny Singhania Sarovar Portico, Raipur
Ny fizahan-tany mena dia nanjary safidy voalohany ho an'ny Sinoa maro amin'ity taona ity